झुक्किएर पनि गुगलमा सर्च नगर्नुहोस यस्ता कुरा ! | सुदुरपश्चिम खबर
झुक्किएर पनि गुगलमा सर्च नगर्नुहोस यस्ता कुरा !
गुगलमा औषधिको नाम सर्च नगर्नुहोस्:
बम बनाउने तरिका:
गुगलबाट सोझै मोबाइल एप डाउनलोड नगर्नुहोस्:
जसले हाम्रो डिभाइसलाई हानी पुर्याउनुका साथै हाम्रो फोनमा रहेको डेटा समेत चोरी गर्दछन् । त्यसैले गुगल प्ले स्टोर तथा एप्पल एप स्टोरबाट मात्रै एप डाउनलोड गर्ने बानी बसाल्नुहोस् ।
निजी ईमेल गुगलमा सर्च नगर्नुहोस्:
पोर्नग्राफी सम्बन्धी सर्च:
फ्री एन्टिभाइरस तथा सफ्टवेयर सर्च नगर्नुहोस्:
तर कुन सक्कली कुन नक्कली भन्ने कुरा छुट्याउन निकै मुस्किल हुन्छ । ह्याकरहरुले नक्कली सफ्टवेयर तथा एप राखेका हुन्छन् । यदि तपाईंले त्यस्ता सफ्टवेयर तथा एप डाउनलोड गर्न पुग्नु भयो भने तपाईं ह्याकर तथा साइबर अपराधीको जालमा पर्न सक्नुहुन्छ । ( टेकपाना.com बाट साभार )